HUAWEI GR5 mini smartphone | မိုဘိုင်းဖုန်းများ | HUAWEI Myanmar
ထောက်ပံ့သည် HUAWEI GR5 mini smartphone
A Sleek Future, in Your Hand သင့်လက်ထဲမှ ချောမွေ့ပြောင်လက်သော အနာဂါတ်
High-resolution FHD 5.2’’ Display delights your eyes. Sleek design combines beauty and comfort. The finely crafted metal body makes this device an expression of your elegance and class. အနုစိတ်ဖော်ပြနိုင်သော FHD ၅.၂လက်မ မျက်နှာပြင်မှာ သင့်အမြင်အာရုံကမွေ့လျော်နေမှာပါ။ အလှတရားနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုတို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ချောမွေ့ပြောင်လက်သော ဒီဇိုင်းနှင့် ကောင်းမွန်စွာ ပုံဖော်ထားတဲ့ သတ္တုကိုယ်ထည်တို့က သင့်ရဲ့လှပကျော့ရှင်းမှုနဲ့ အဆင့်အတန်းတို့ကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေပါတယ်။
Your Pocket Photo Studio သင့်အိတ်လေးထဲက ဓါတ်ပုံစတူဒီယို
The 8MP(f/2.0) front-facing camera ensuresasharp and consistently vibrant selfie. The wide-angle (78°) 13MP f/2.0 back camera delivers stunning photos, even in low light. Blue light filter and software features give life to your photos. Fast Shutter Capture and Time-Lapse features keep pace with you. 8MP(f/2.0) အရှေ့ကင်မရာက သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိပြီး စူးရှတောက်ပတဲ့ ဆဲလ်ဖီရိုက်ချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ မြင်ကွင်းကျယ် (78˚) 13MP f/2.0 အနောက်ကင်မရာက အလင်းနည်းသည့်အခြေအနေမှာပင်လျှင် ရှင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကောင်းသော ဓါတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းရှိပြီး Blue light filter နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်လုပ်ဆောက်ချက်တို့ကလဲ သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို အသက်ဝင်စေပါတယ်။ လျှင်မြန်သော ဓါတ်ပုံရိုက်ချက်နှင့် အချိန်အပိုင်းငယ် လုပ်ဆောင်ချက်များကလဲ သင်အတွက်ရိုက်ကူးပေးရန် အသင့်ပါပဲ။
Elegant Power That Lasts ပိုမိုတာရှည်ခံသော စွမ်းအင်
Raw power and delicate balance, in the palm of your hand. The 16 nm Kirin 650 64Bit Octa-Core processor chipset is powerful yet efficient. Enjoyafluid and seamless experience, from games, to web, to your favorite apps. စွမ်းအင်နှင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုတို့ရဲ့ ညီမျှခြင်းတို့က သင့်လက်ထဲမှာပါ။ 16nm Kirin 650 64bit Octa-Core ပရော်ဆက်ဆာက စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး စွမ်းအင်ချွေတာမှုအပြည့်ရှိပါတယ်။ ဂိမ်း၊ အင်တာနက်နှင့် သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော အက်ပ်များမှ ချောမွတ်ပြေပြစ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အတွေ့အကြုံကို ခံစားနိုင်မှာပါ။
Security at Your Fingertips သင့်လက်ချောင်းထိပ်မှ လုံခြုံရေးစနစ်
Unlock your device in less than halfasecond. HUAWEI’s new fingerprint sensor is faster, more accurate, and more secure than ever. Even in the rain, the Fingerprint Sensor 2.0 and HUAWEI GT3 recognizing you withatouch. သင့်ရဲ့ဖုန်းကို စက္ကန့်ဝက်အတွင်း လော့ခ်ဖွင့်လိုက်ပါ။ HUAWEI ရဲ့ လက်ဗွေရာစနစ်သစ်ဟာ ပိုမိုမြန်ဆန်၊ မှန်ကန်ပြီး လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိပါတယ်။ မိုးရေထဲမှာပင်လျှင် Fingerprint Sensor 2.0 နဲ့ HUAWEI GR5 mini က သင့်လက်ချောင်းရဲ့အထိအတွေ့ကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။